Radal-Siete-Tasas National Park, Radal Siete Tazas National Park - Curicó
Amerika Atsimo Shily Curico
Adiresy: Radial, Chilie;
Phone: +56 71 222 8029;
Ny ora fiasana: amin'ny fahavaratra - 8.30 hatramin'ny 20.00, amin'ny ririnina - 8.30 hatramin'ny 17.30
Ny fitsidihana an'i Chile dia mendrika ny hahita ireo toerana mahafinaritra sy mahagaga izay manankarena ity firenena ity. Ny Valam-pirenena National Radal-Ciete-Tasas dia misy eo anelanelan'ny faritra Kuriko , Talca ary Maule. Na eo aza ny toerana lavitra an'i Santiago , dia tsy mihena ny isan'ireo olona te-hitsidika azy.
Niorina tamin'ny 1981 ny National Park Radal-Cete-Tasas ary hatramin'izay dia nankafizin'ny mpitsidika foana ireo farihy sy riandrano mahavariana, ary ireo faritry ny tendrombohitra. Ny faritra manontolo amin'ny tahiry dia manodidina ny 5000 hektara.
Ny ankamaroan'ny mpizaha tany dia nandre momba ny toerana iray tao amin'ilay valan-javaboary, toy ireo fito Seven , ary te-hahita izany aloha izy ireo. Izy io dia fananganana tendrombohitra avy any Andes, misy fito fisaka voajanahary miavaka, ka ny tsirairay avy dia mifarana amin'ny riandrano. Ny riandranon'ny rano dia avy amin'ny haavony samy hafa - avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 10,5 m. Ny onja mahavariana indrindra dia ny volon'ny mariazy sy ny liona , ny haavon'ny voalohany dia 40 m, ary ny faharoa - 20 m.
Fanintonana iray hafa, izay tonga any amin'ny Valam-pirenena ao Radal-Cete-Tasas, dia ny zaridaina Anglisy . Misy fampirantiana maharitra ny fampiratiana arakolojika. Ireo mpizahatany dia aseho ireo biby natono, vato vato, izay mampiseho mazava ny dingana amin'ny famoronana ireo toerana ireo.
Inona no tokony hatao ho an'ny mpizaha tany?
Azo jerena ny valan-javaboary amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra sy an-tongotra, indrindra amin'ny fampakaram-bady mba hahatongavana any amin'ny Lohasahan'i Indigo . Mahafinaritra tokoa ny toerana ahafahana maka sary, tahaka ny hita sy ny toerana mahafinaritra rehetra any amin'ny valam-pirenena. Fialam-boly iray hafa ho an'ny mpizahatany dia skiing amin'ny renirano, milomano any anaty farihy.
Avy ao amin'ny toeram-ponenana Valle de las Catas, dia manomboka ny lalana mankany amin'ny Seven Cups sy ny renirano Lionza. Toerana mahavariana ny aloky ny rano - tavoahangy, izay mitranga any amin'ny renirano. Afaka mahita sy mankasitraka ny tontolon'ny seha-pihariana ianao. Raha te-hiditra ianao, afaka midina any amin'ny tohatra ianao ary manidina eny amin'ny dobo roa. Na izany aza, tokony hiomana amin'ny rano mangatsiaka sy ny angovo mahery vaika ny olona, ​​fa maro amin'ireo mpizahatany no tsy mijanona mihitsy.
Ny vanim-potoana azo ekena indrindra amin'ny fitsidihana dia fahavaratra, ny volana Aprily-May dia mihena ny fihenan'ny mpizahatany, izay manintona ireo izay tsy tia olona. Ao amin'ny valan-javaboary dia misy, fantatra loatra, lalana tsy dia fantatra loatra. Momba ny tranonkala El Bolson dia tsy fantatra amin'ny mpizaha tany rehetra, na dia misy lalana roa ao amin'ny faritaniny aza, izay arak'izany dia mendrika handehanana any amin'ny mpizahatany rehetra. Ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo dia ny halavan'ny lalana sy ny fiatoana farany.
Aiza no hijanonan'ny mpizaha tany?
Afaka mijanona any amin'ny toeram-ponenana ireo mpizaha tany. Ny iray amin'izy ireo, Valle de las Catas , any amin'ny halalin'ny valan-javaboary, no manolotra ny trano tsara indrindra. Ao amin'ny valan-javaboary dia misy toeram-ponenana ho an'ny mpizahatany rehetra, izay manamora ny fitambaran-trano sy trano fialam-boly malalaka.
Ahoana ny fandehanana any amin'ny valan-javaboary?
Avy any Santiago, afaka miditra amin'ny Park National Park Radal-Ciete-Tazas, mandany adiny 3 eny an-dalana. Voalohany dia mila mitondra fiara amin'ny lalana Ruta 5 Sur ianao, ary avy eo manodidina ny tanànan'i Molina, ento ny lalana K-275. Ny famantarana dia napetraka teny an-dalana, ka saika tsy vita mihitsy ny mandalo.
Raha tsy misy ny fahazoan-dàlan'ny mpamily dia azonao ampiasaina ny fitateram-bahoaka. Voalohany dia tsy maintsy miala ny renivohitra mankany Molina isika, ary avy eo dia mampiasa ny serivisy orinasa tsy miankina, izay haka ny pesos chilean 3 arivo eo am-bavahadin'ny kianja.
Firy ny zaza no handanja 9 volana?
17-Oh ny progesterone ambany
Ny ankizy manana alèjy - inona no tokony hatao?
Famantarana ny vehivavy tsy vehivavy
Pasta misy henan'alika
Calla ao amin'ny vilany - fikarakarana trano
Kaviaar ho an'ny kôkômbra amin'ny ririnina
Tongolo volo - recipe
Fanandramana bevohoka tsara
Mirandrana ho an'ny lalantsara
Tavoahangy «basy Malachita»
Mofomamy tsotra sy matsiro
Ny fironana eo amin'ny lamaody ny lohataona amin'ny lohataona 2016 - kiraro